ကောင်းမွန်ဝင်း: မချစ်မနှစ်သက်သူ မင်း
မြန်မာတွေကတော့ ရန်သူငါးပါး ကို ရေ၊ မီး၊ မင်း။ ခိုးသူ၊ မချစ်မနှစ်သက်သူ လို့ဆိုကြတယ်။
ဂျပန်တွေမှာလည်း အလားတူ အဆိုရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ကြောက်စရာ ၄မျိုးလို့ဆိုကြတယ်။ (ရှေးယခင်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ စကားပါ)
ဘေးဒဏ်ခံရသူတွေရဲ့ စကားကို စိတ်ဝင်တစား နားထောင်ပေးတယ်
“ငလျင်၊ မိုးကြိုး၊ မီး၊ တိုင်ဖူး ” ဆိုတာတွေပေါ့။ အခုတော့ တချို့ဂျပန်တွေက အဲဒါကိုနှစ်ခုထပ်ပေါင်းရမယ်လို့ ပြောလာကြတယ်။ “ ဆူနာမီ နဲ့ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဓါတ်ရောင်ခြည်” ပေါ့။
မြန်မာတို့ရဲ့ ရန်သူငါးပါး ရယ် ဂျပန်တို့ရဲ့ ရန်သူ ၆ပါး (လူတွေ အသစ်ထပ်ထည့်တာအပါအ၀င်) ကိုယှဉ်ကြည့်ရင်းနဲ့ ကျွန်မတို့မှာလည်း ဒုက္ခ၊ သူတို့မှာလည်း ဒုက္ခ မသေးကြဘူးလို့စဉ်းစားမိပါတယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ ကျွန်မလို ကိုယ့်မြန်မာပြည်က ရန်သူမျိုးငါးပါးကိုလည်းကြောက်ရ၊ လက်ရှိနေတဲ့ ဂျပန်မှာရှိတဲ့ ဒုက္ခကိုလည်း ကြုံရတဲ့သူတွေလည်း နည်းလှမယ်တော့ မထင်ဘူး။
ဒါပေမယ့် ဂျပန်တို့က ဒုက္ခရောက်ချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ “ မင်း” က ကိုယ်တော်တိုင်ထွက်လို့ ပြည်သူတွေကို အားပေးတော်မူတယ်။ အဲဒီ “မင်း” က သာမန်အရပ်သား“မင်း”မဟုတ်သလို စစ်တပ်ကနေပြောင်းသွားတဲ့
“ အစိုးရ”လည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ “ဘုရင်” ပါ။ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် အလိုက် ထီးမွေနန်းရာဆက်ခံသူပေါ့၊ မင်းတို့ရဲ့ အဌာရသ အတတ်ပညာတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ပညာအရည်အချင်းလည်းရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ ။ အဲသည်လို “ဘုရင်မင်းမြတ် ”က သူ့ရဲ့ပြည်သူတို့ကို သနားညှာတာ ကိုယ်ချင်းစာတယ်။ မြေပြင်မှာဒူးထောက်လို့ ပြည်သူတို့ကို သတင်းမေးအားပေးတော်မူလေတယ်။
သဘာဝဘေးဒဏ်ခံစားရသူတွေကို ၃၀ရက်နေ့က ဘုရင်နဲ့ မိဖုရားကိုယ်တိုင် အားပေးနှစ်သိမ့်နေပုံ
သူတို့ကို ကြည့်ရတာ“ ဖရဏာပီတိ ဂွမ်းဆီထိ ”ရှိလှပေတယ်။
စကားမစပ် တကယ်လို့များ စာဖတ်သူရောက်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံမှာ အလားတူ ကြောက်စရာ၊ ရန်သူတော်ကြီးများလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ “ယဉ်ကျေးမှု၊ဆိုစကား” များ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ပါရှင်။
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Thursday, March 31, 2011
ပြည့်ရှင်မင်းကြီးနှင့် မိဖုရားကြီး။ သာမန်ပြည်သူတစ်ယောက်ရှေ့မှာ ဒူးထောက်နေတာ မြင်ရတော့ စိတ်ထဲ ၀မ်းသာကြည်နူးမိသလိုလို ၀မ်းနည်းမိသလိုလိုကြီး ဖြစ်မိတယ်။ တော်လိုက်တာနော်။
ဒီနိုင်ငံမှာကတော့ ကြောက်စရာယဉ်ကျေးမှု ရှိမရှိတော့မသိဘူး။ W သုံးလုံး အစိုးမရဘူးဆိုတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆန်ဆန် စကားပုံတော့ ရှိနေလေရဲ့။
weather, woman and work are unpredictble တဲ့။ အဲဒါ ယူကေ (အထူးသဖြင့် လန်ဒန်)ရဲ့ စကားပုံပါ။
ဘေးရန်အားလုံး ကင်းရှင်းပြီး ကျန်းမာချမ်းသာ ရှိနိုင်ပါစေအမ။
It's so touching to see the humble photo of the couple.I don't know whether swiss have that kind of saying or not.I'll ask my friends later.Take care sis!
လူကို တန်ဖိုးထားဆက်ဆံတတ်တဲ့ ဘုရင် အကြောင်း ဖတ်ရတာ စိတ်ကြည်နူးစရာ ကောင်းလှပါတယ်၊ အင်းလေ... ပြည့်ဝသူတွေဆိုတော့ ဒီလိုပေါ့...၊ ဆွစ်ဇာလန်မှာ အဲဒီလို စကားပုံဆန်ဆန် ရှိတာမျိုးတော့ မကြားဖူးသေးဘူးဗျ၊ မကောင်းမွန်ဝင်းတို့ မိသားစုနဲ့ တကွ ဂျပန်လူမျိုးတွေ တည်ငြိမ်သော အခြေအနေကို အမြန်ဆုံး ပြန်ရောက်ပါစေဗျာ...။
ဂျပန်ဘုရင်ရဲ့ ပြည်သူတွေအပေါ် အလေးထားမှု၊ ရိုသေလေးစားမှုကို ကြည့်ပြီး ၀မ်းသာပီတိဖြစ်မိတယ်..
ဒါဟာ ပြည့်ဝသူတွေရဲ့ ညွှတ်ကိုင်းမှုပါဘဲ. စပါးနှံ ဥပမာလိုပေါ့။
မပြည့်ဝသူတွေကျတော့ ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်နဲ့။ ကွာခြားလိုက်တာ ................
အခုတလော အမ တင်လိုက်သမျှ ပို့စ်တွေက
ဖတ်ရတာ အရမ်းကောင်းတယ်၊ ကျေးဇူး တင်